नक्षत्र Perseus को इतिहास | नेटवर्क मौसम विज्ञान
नक्षत्र Perseus को इतिहास
अघिल्लो लेखहरूमा हामी नक्षत्रहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं र उनीहरू कसरी चिन्न सकिन्छ भनेर। हामी यसका कारण किनका बारे नामहरू दिइरहका बारे कुरा गरिरहेका थियौं र ती मध्येहरू यो भनिन्थ्यो कि तिनीहरू पौराणिक कथा र ईतिहासबाट आएका हुन्। यस अवस्थामा हामी एउटा मिथ्याको बारेमा कुरा गर्ने छौं जसले नक्षत्रको नामलाई जन्म दियो। बारेमा पर्सियस। यस लेखमा हामी तपाईंलाई सम्पूर्ण कथा बताउन जानेछौं जसले यस नामलाई जन्म दिन्छ र किन यसलाई ताराको नक्षत्रमा राख्ने निर्णय गरियो।
के तपाइँ उत्सुक हुनुहुन्छ र पर्सियस र एन्ड्रोमेडाको कथा जान्न चाहनुहुन्छ? पढ्न जारी राख्नुहोस् र तपाईं यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
2 पर्सियस, ज़ीउसका छोरा
3 पर्सियस मिशन
4 एन्ड्रोमेडा र उनको बलिदान
यो कथा अर्सोसका राजा एक्रिसियोबाट सुरु हुन्छ। यस व्यक्तिले अग्निपसँग विवाह गरे र उनको एउटी छोरी भयो जसको नाउँ उनीहरूले दाना राखे। कुनै पुरुष बच्चा नभएको (त्यस समयमा पुरुषहरू साम्राज्यको अधिकारमा परेका थिए र यसैले एउटा पुरुष हुनु आवश्यक छ) एक्रिसियसले उनको बच्चा छ कि छैन र यदि यो पुरूष हुन्छ भने एक ओराकललाई सोधे। जसमा उनले जवाफ दिए कि उसको कहिल्यै अरु बच्चाहरु हुने छैन। जवाफमा, Acrisio दु: खी थियो, पछि उसको शासन पछि दानालाई उनको सिंहासन हाल्ने अनुमति बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन।
यसमा मुख्य कुरा के हो भने, ऊ कुनै बच्चा जन्माउनेछैन भन्ने खबरले ऊ पर्याप्त थिएन, तर त्यसको सट्टा ओरेकलले उसलाई भन्यो कि उसको नाति उनको हत्या गर्ने थियो। कसरी दानाको छोरोले उसलाई मार्न सक्थ्यो? निस्सन्देह, यो छोरी नभएकोमा छोरीलाई दिएको उदासीनताको बदला हुनेछ। यस प्रकोपबाट जोगिन एक्रिसियो आफ्नी छोरीलाई सुत्न खोजेनन्।
उनलाई राखिएको सेलमा काँसाका पट्टीहरू थिए र ज dogs्गली कुकुरहरूले यसलाई जोगाए जसले उनलाई भाग्न नदिने थिए। ज्युस त्यस समयमा ओलम्पसका बासिन्दाहरूका देवताहरू थिए। एरिसियोको समस्यामा, जीउसलाई उनकी छोरी डानासँग प्रेम भयो। ईश्वरहरूको देवता भएको कारण, कसैले पनि उसले गरेको निर्णयको बारेमा विवाद गर्न सक्दैन र उनले उसलाई जेलबाट बाहिर निकाला। उनले उनलाई सुनले मोहरे र उनका पितालाई पर्सियस नाउँको छोरो बनाए। यो हाम्रो नायकको जन्म भएको थियो।
पर्सियस, ज़ीउसका छोरा
एक्रोसियो आफ्नो जीवनको लागि डराए किनभने उनीसँग अझ बढी बच्चा थिएन, तर उनका नाति पर्सियसले उनको वचन अनुसार उनको हत्या गर्थे। उनको हत्या हुनबाट जोगिन उसले फेरि आफ्नो काम गर्यो र गोप्य रूपमा आफ्नी छोरी र नातिलाई एउटा ट्रunk्कमा बन्द गरेर समुद्रमा फाल्यो। यस तरिकाले, यो सुनिश्चित गरियो कि समुद्र र महासागरका धारहरूले यी गरीब निर्दोषहरूको जीवन समाप्त गर्दछ।
यो ट्रंक सेरिफोस टापुमा नपुगुञ्जेल झर्दै गयो, जहाँ एक मछुवाले बस्ने जो त्यहाँ भेट्टाउन सक्षम थियो र ती दुवैलाई बचायो। यस टापुका राजाले उनीहरूलाई आफ्नो घरमा स्वीकार गरे र उनीहरू ड्रिफ्टि journey्ग यात्राबाट पुनः प्राप्त गर्न सक्षम भए। एक्रोसियोले सोचेको भन्दा विपरित, त्यो टापुमा आमा र छोराको फलिफाप भयो किनकि, Polydectesयस टापुका राजा दानाको प्रेममा परिणत भए र एक समय बितिसकेपछि उनले उनलाई बिहे गर्ने मन गरे।
यो राजा दानाको छोरोलाई मुक्त गर्न चाहान्थे किनभने ऊसित कुनै पैसा थिएन र ऊ गरिब आइमाईलाई बिहे गरिरहेको छु भनेर उसले भन्न सकेन। त्यसकारण उनले मानिसहरूलाई एउटा धनी महिलासँग बिहे गर्ने इच्छा व्यक्त गरे र सबैलाई उपहार ल्याउन पठाए, जुन उसले आफ्नी स्वास्नी पत्नीलाई दिने थियो। उनले पर्सियसलाई आत्महत्या अभियानमा पठाए। यस मिसनको शामिल गोर्गन मेदुसाको टाउको ल्याउनुहोस्। यी जेलिफिससँग जो कोहीले पनि आफ्नो आँखामा देख्ने ढु stone्गालाई घुमाउने क्षमता राख्दछ। तसर्थ, यो लगभग एक आत्मघाती मिशन थियो।
अर्कोतर्फ, बुद्धिमत्ता र युद्धकी देवी एथेनाले पर्सियसलाई गोर्गन मेदुसाको टाउको ल्याउने जिम्मेवारीबारे सिके र उनलाई आफ्नो जीवन वा मृत्यु अभियानमा नाश नहोस् भनेर मदत गर्न गए। उनले उसलाई मद्दत गरिन् किनभने उनी मेडुसाकी शत्रु थिइनन् र सबै मिलेर उनलाई अन्त्य गर्न मद्दत गरे।
उनले उनलाई उनको चमकदार ढाल दिए जुन उनीले मेदुसालाई अन्धा बनाउँछिन् र उनीसँग अमर बहिनीहरूमा भिन्नता राख्न सक्थे। तिनीहरू विपरीत पर्सियसको लक्ष्य घातक थियो र उपहारको रूपमा लाउन उसले आफ्नो टाउको काट्न सक्छ। उनले उसलाई पखेटाको जुत्ता पनि दिए जुन उनी हाइपरबोरियन्सको भूमिमा उडान गर्न सक्थे। यो त्यहाँ छ कि गोर्गनहरु बस्थे र सुतिरहेका थिए। यो आक्रमण गर्न उत्तम अवस्था थियो। एथेनाले मेदुसाको टाउको काट्नको लागि डोरीले डोरी झार्दा उनले ढालको प्रतिबिम्बमा उनको आँखा राखिन्। यससँग, उसले आफूले के गर्न खोजेको कुरा हासिल गर्न सक्षम भए।
एन्ड्रोमेडा र उनको बलिदान
क्यासियोपिया र उनको लोग्ने कैफियस फिलिष्टियामा बस्थे। उनी यति गर्व र अहंकारी थिइन् कि त्यो निर्णय गर्नका लागि उनी र उनकी छोरी एन्ड्रोमेडा, तिनीहरू समुद्रको अप्सरा भन्दा सुन्दर थिए। पोसेडोनका छोरीहरू नरेडहरू, ईन्फेरियरको पक्षमा त्यस्तो घमण्डी देखेर रिसाए र आफ्ना मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने राक्षस पठाएर उनीहरूलाई सजाय दिने छनौट गरे। आफ्ना मानिसहरूले कसरी विनाश हुँदैछन् भनी देखेर राजाहरूले ओरेकललाई चेताउनी दिए र जनतालाई आशा थियो कि एन्ड्रोमेडाको बलिदान चढाउनु थियो।
एन्ड्रोमेडा बलि चढाउन लागेको एउटा चट्टानमा थिए जब मेदुसाको टाउको भर्खरै काटिएको पर्सियसले राक्षसलाई देखे र उसलाई प्रफुल्ल गर्न उसको टाउको देखायो। यसरी उनले उनलाई बचाउन सके र एक अर्कालाई देखेर तिनीहरू सिधा प्रेममा परे।
अन्ततः, पर्सियस एन्ड्रोमेडासँग विवाह गर्न आफ्नो टापुमा फर्के र उसले आफ्नी आमालाई भेट्टायो जसले पोलिडेटेट्ससँग विवाह गर्न अस्वीकार गरे। उनी राजाका मानिसहरूदेखि लुकिरहेकी थिइन्। सबै कुराको अन्त्य गर्न पर्सियसले राजा र उनको सेनाको सामना गरे र ती सबैलाई गोर्गनको टाउको प्रयोग गरेर ढु stone्गामा हाले। यसै गरी उनीहरूले ओलम्पिक खेलहरू मनाए र डिस्कको फाँकमा प्रक्षेपण मोडिएको थियो र जनतामा झर्दै थियो। सबैलाई चकित पार्न, मारेको व्यक्ति एक्रिसियो थियो, उसको आफ्नै हजुरबुबा यसरी ओरेकलको भविष्यवाणी पूरा भयो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, पर्सियस नक्षत्रको इतिहास मनमोहक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » नक्षत्र Perseus को इतिहास